Uyijonga njani ipesenti yebhetri ye-iPhone | ndisuka kuMac
Uyibona njani ipesenti yebhetri kwi-iPhone
Iimodeli zamva nje ze-Apple iPhone zongeza ibhetri ebukekayo ngokwenene. Ngexesha lokubhalwa kweli nqaku, i-iPhone ikwinguqulo yayo ye-13, zonke, kubandakanya i-iPhone mini, i-iPhone, i-iPhone Pro kunye ne-Pro Max, yongeza ibhetri ngokuzimela okugqwesileyo ngokwenene. Uninzi lwabasebenzisi bale modeli ye-iPhone 13 abanaso nasiphi na isikhalazo malunga nebhetri kodwa njani ukubona ipesenti yebhetri kwi iPhone?
1 Uyibona njani ipesenti yebhetri kwi-iPhone
2 Fumana kwaye uvule ipesenti yebhetri kwezinye iimodeli ze-iPhone
3 Sebenzisa iwijethi yebhetri kwi-iPhone
4 Musa ukusebenzisa usetyenziso lomntu wesithathu ukubona ipesenti yebhetri
Lo ngomnye wemibuzo esibuzwa kakhulu ngabasebenzisi abangazange babe nemodeli ye-iPhone. Kwaye kukuba inkampani yeCupertino isuse ipesenti yebhetri kwisikrini sokutshixa kunye neKhaya. Ngoku unokubona oku kuphela ngokuswayipha ezantsi nje kwe icon yebhetri kwiziko lolawulo. Ewe, ilula ngolo hlobo kodwa ngokucacileyo kuya kufuneka uyokukhangela olu khetho ngokuzithandela ukusukela oko akukho pesenti yebhetri ibonakala phezulu kwii-iPhones ezinenotshi.
Kwi-iPhone 13 kunye nezinye iimodeli ze-iPhone ezine-ID yoBuso (i-iPhone X kwaye kamva), ipesenti yebhetri ibonakala kwiZiko loLawulo. Ukwenza oku kufuneka uswayiphe ezantsi ukusuka kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini.
Kwiimodeli ze-iPhone ngaphambili kunezo zobusuku ukuba ipesenti yebhetri ivela kweyona nto iphambili kwaye itshixe isikrini ngalo lonke ixesha siyenza isebenze kuseto. Le pesenti yebhetri kufuneka isebenze ngesandla kule mifuziselo yakudala ye-iPhone, makhe sibone ukuba yenziwe njani.
Fumana kwaye uvule ipesenti yebhetri kwezinye iimodeli ze-iPhone
Kubo bonke abo basebenzisi banemodeli yakudala ye-iPhone ngaphandle kwepesenti yebhetri eboniswe kwibar yesimo ebusuku, kunokwenzeka ukuba le pesenti ayiboniswanga ngokwemveli, ngoko ke kufuneka isebenze. Kuba Yiya kwiisetingi> Ibhetri kwaye uvule "ipesenti yebhetri". Ukuba usebenzisa imowudi yamandla aphantsi, ipesenti yebhetri iya kuhlala ibonakala kwibar yesimo.
Oku ngokucacileyo kusebenza kwi-iPad kunye ne-iPod Touch. I-iPhone SE (isizukulwana sesibini), i-iPhone 2 okanye ngaphambili, i-iPad (zonke iimodeli), kunye ne-iPod touch (zonke iimodeli) bonisa le pesenti yebhetri phezulu ekunene, kanye ecaleni kwe icon yebhetri.
Sebenzisa iwijethi yebhetri kwi-iPhone
Sele sikuthethile oku, sinokujonga iimodeli ezintsha ngobusuku ukusuka kwi-iPhone X ukuya kwimodeli yangoku. Ezi iPhones ngokucacileyo azisongezi loo pesenti kwibar yesimo se-iPhone, nangona benokuyongeza ukusukela oko inotshi yeemodeli ezintsha incinci. Ngayiphi na imeko, i-Apple ayibandakanyi le pesenti yebhetri, nangona ungasebenzisa iwijethi ngokuthe ngqo ukukwazi ukubona ipesenti yebhetri nangaliphi na ixesha.
Nantsi enye indlela ekhawulezayo yokujonga ipesenti yebhetri yakho, kunye newijethi yebhetri kwiscreen sakho sasekhaya okanye iJonga namhlanje. Ukongeza le widget kufuneka sityibilike ekunene, cofa ezantsi apho ithi hlela kwaye yongeza iwijethi entsha enophawu lokudibanisa (+). Kanye apha sijonge ibhetri songeza.
Inzuzo yokongeza iwijethi yebhetri kwi-iPhone kukuba ukongeza ekusinikeni ipesenti yebhetri yesixhobo sethu, Ikwasinika ipesenti yebhetri yeApple Watch yethu kwimeko esinayo okanye yee-AirPods, AirPods Pro okanye AirPods Max.. Oku kuyahambelana nezinye ii-headsets ezifana ne-Jabra, i-Sudio kunye nezinye ii-headsets ezingenazingcingo.
Musa ukusebenzisa usetyenziso lomntu wesithathu ukubona ipesenti yebhetri
KwiVenkile yeApp sifumana usetyenziso lomntu wesithathu olusinika into efanayo ukubona ipesenti yebhetri ye-iPhone yethu. Kule meko, kufuneka sitsho ukuba akukhuthazwa ukusebenzisa olu hlobo lwesicelo kuba aluchanekanga ngokupheleleyo. Kuyo nayiphi na imeko, kusoloko kungcono ukusebenzisa iinketho zomthonyama ze-iPhone.
Kuyenzeka ukuba ezi zicelo aziboneleli ngebhetri yokwenyani kwisixhobo sethu kwaye oku akulunganga kwaphela. Abasebenzisi abaninzi bazamile usetyenziso olulolu hlobo kwaye ekugqibeleni bagqibe ekubeni bazisuse kwisixhobo. namhlanje nge Ukufika kwamawijethi e-Apple kwi-iPhone eyona yangoku kunye nokhetho lokuvula ipesenti yebhetri kwisethingi yesixhobo ingaphezulu kokwaneleyo.
Enye ingxaki esiyifumanayo kukuba umsebenzisi ucinga ngepesenti yebhetri. Ngokucacileyo, ukuba nebhetri elungileyo kunika amava omsebenzisi angcono kakhulu kwizixhobo. okwangoku kodwa kufuneka sithathele ingqalelo ukusetyenziswa esikunika yona kwaye ngakumbi ubudala bebhetri kuba ayizizo zonke ezinokuthi zihlale usuku lonke kuxhomekeke kusetyenziso esilunika lona.
Isitshixo kulo mba kukusebenzisa ifowuni ngaphandle kokuqaphela ipesenti yebhetri oko kuhlala nathi ngamaxesha onke. Ngokucacileyo, ukuba sifuna isixhobo ngokungxamisekileyo, kuhle ukuba sijonge ukuba singehli kakhulu, kodwa akulunganga ukusijonga kwakhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » iPhone » Uyibona njani ipesenti yebhetri kwi-iPhone
watchOS 8.4 RC ilungisa imiba yokutshaja ye-Apple Watch
I-Apple Music ine-15% yemarike yomculo wokusasaza